Nkpirikpi Deadend clamps Manufacturers na Suppliers | China nkpirikpi Deadend clamps Factory
High voltaji cable nkpirikpi deadend clamps-eji arịlịka maka nwụrụ anwụ-agwụcha eletriki USB gwara mmanụ na-eduzi
1. erughị ala clamps ghara chọrọ ike nke elu voltaji eletriki efe n'elu USB.
2. Kwadebere na mkpuchi Idupu njikọ, nke iwepu obere sekit ihe.
4. erughị ala mwekota nwere nsogbu na-proofed, nke na-ebelata ihe ize ndụ nke mmebi n'ihi ifufe ije na vibrations.
5. erughị ala mwekota belata eletriki nchegbu.
6. Ịgbapụ ka a di ntakiri-agbasa gwụsịrị ibu (MBFL) nke cable, nke kwesịrị ghara ka elu 95% nke na-agbasa ibu nke ya.
7. Nje clamps na-mere nke
Corrosion eguzogide aluminum alloy ahụ
Frost, na-ekpo ọkụ na UV-ụzarị eguzogide plastic
galvanized ígwè timbul
igwe anaghị agba nchara ịgbapụta
Jera si Ọkara voltaji efefe akara erughị ala clamps agafeela isi ule ndị dị otú ahụ anyị: UV okpomọkụ merela agadi ule, corrosion ịka nká ule, kacha ike ọdụdọ ule.
Mmadụ Bịa ka kpọtụrụ anyị nwere ihe nkọwa banyere cable arịlịka clamps.
Jera awade kasị dechara ngwaahịa nso nke eletriki ngwa maka OHL efefe e.
Gwara mmanụ USB erughị ala mwekota, Ai-70
Gwara mmanụ USB erughị ala mwekota, Ai-120
Gwara mmanụ USB erughị ala mwekota, Ai-35